Sat, Jun 6, 2020 at 8:58pm
यीनै हुन् अमेरिकाको लस–वेगासमा ५९ व्यक्ति मार्ने स्टिफन प्याडक
न्यूयोर्क । अक्टोबर २ अर्थात आइतवार राति एक संगीत समारोहमा भेला भएका मानिसहरूमाथि भवनको ३२ औं तल्लाबाट गोली बर्साउने ब्यक्ति स्टिफन प्याडकको कुनै आपराधिक इतिहास वा आतंकवादी संगठनसँगको आबद्धता नदेखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्याडकले मान्डले बे रिजोर्ट र क्यासिनोमा भेला भएका मानिसमाथि किन अनायसै गोली चलाए र त्यसपछि आत्महत्या गरे भन्ने कुरा कानून कार्यान्वयन अधिकारीहरूले अहिलेसम्म ठहर गर्न सकेका छैनन् ।..
सावधान ! फेरी भेटियो नेपाली एक हजारको नक्कली नोट
गोरखा । गोरखा सदरमुकाममा नेपाली एक हजारको नक्कली नोट भेटिएको छ । गोरखा नगरपालिका– ७ नयाँ बजारको ओम शंकर स्टोरमा सामान किन्दा ग्राहकले नक्कली नोट दिएर गएको स्टोरका प्रोप्राइटर प्रेम श्रेष्ठले बताएका छन् । यद्यपी कुन चाहिं ग्राहकले दिएको भन्ने थाहा नभएको उनको गुनासो छ । पसल बन्द गरी बेलुका पैसा मिलाउने बेलामा अरू हजारको नोटभन्दा फरक देखी जाँच्दा नक्कली भएको थाहा..
नेपालका एटीएमबाट पैसा चोर्ने 'विदेशी नागरिक' फेरि समातिए
काठमाडौं । नक्कली एटीएम कार्ड प्रयोग गरी अनधिकृत ढंगले अर्काको एकाउण्टबाट रकम निकाल्ने विदेशी नागरिकहरु फेरी प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले एटीएम ह्याकरहरुविरुद्ध चलाउँदै आएको कारबाहीमा आइतबार दुई जना विदेशी नागरिक पर्यटकीय नगरी ठमेलबाट पक्राउ परेका हुन् । राहदानी नम्बर ३८४०३८०७८ का २३ वर्षीय बुल्गेरियन नागरिक र राहदानी नम्बर यू १०३२८५९१ का टर्कीस् नागरिकलाई प्रहरीले समातेको थियो..
एटीएमबाटै पैसा चोरिएला है !
तपाईंले एटीएमबाट पनि पैसा चोरी भएको थाहा पाउनुभएको छ ? अझै भनौं कतै तपाईंकै एटीएमबाट पैसा चोरी भएको पो छ की ! एकपटक आफ्नो बैंक खाता पनि जाँच गरिहाल्नुस् । हो आजभोली अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधीहरुले ग्राहकको खातामा रहेको पैसा नक्कली एटीएमबाट निकाल्ने समेत गरेका घटनाहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । बुल्गेरिया, टर्की, रोमानियालगायत देशका संगठीत अपराधी अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण लिएर विभिन्न..
बाँके साउन ८ गते । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका ८ का सामान्य आर्थिक अवस्था भएकी एक महिला ५ करोड रुपिया बढि ठगिको आरोपमा पक्राउ परेकी छन् । बढि ब्याज पाईने लोभमा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका आसपासका करिब ३० जना ब्यक्तिहरु भने सावा समेत नपाउने अवस्था आएपछि तनावमा परेका छन् । पीडितले ठगीको उजुरी दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले बैजनाथ ८ का..
बेचबिखनबिरुद्द आशा नेपाल
नेपालगन्ज, साउन ३ गते । मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि बाँकेमा आशा नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले काम सुरु गरेको छ । जेठ १ गतेदेखि औपचारिक काम सुरु गरेको संस्थाले छोटो समयमै महिला तथा बालबालिकाको उद्धार लगायतका कार्य गरेको संस्थाका नेपालगन्जस्थित कार्यालयका संयोजक तृष्णा रानाले बताइन् । आशा नेपालले खजुरा गाउँपालिका विट राखेर काम गर्ने भएको छ । यसैगरी वादी समुदायमा जनचेतनामुलक अभियान..
पश्चिम नेपालमा भुकम्पको धक्का
शनिबार, आषाढ ३१, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार ३१ । पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्ला दैलेखमा केन्द्रबिन्दु भएर शनिबार राती भुकम्प गएको छ । राती १० बजेर २० मिनेटमा दैलेख केन्द्र बिन्दु भएर ४ रेक्टर स्केलको भुकम्पको धक्का महसुश गरिएको हो । आम मानिसहरु राती सुतेको अवस्थामा भुकम्पको धक्का महसुश गरिएको हो । भुकम्पबाट क्षति भएनभएको बारेमा एकिन बिवरण प्राप्त भएको छैन् । ..
साउदी अरबमा ८ बर्षदेखि बन्दी जीवन बिताएकी नेपाली चेलीको उद्दार
साउदी अरब/ साउदी अरबमा ८बर्षदेखि बन्दी जीवन बिताउन बाध्य एक नेपााली चेलीको उद्धार भएको छ । एनआरएन ए एनसिसि साउदीको मातहतमा रहेको अल कासिम क्षेत्रीय समन्वय समिती अल कासिमले ८ बर्षदेखि नेपाल जान नपाई घर भित्र बन्दी जीवन बिताएकी, खद्दामा (हाउसमेड) को रुपमा कार्यरत पाल्पा घर भएकी कमलालाइ उद्दार गरि नेपाल पठाउन सफल भएको हो । घरको गरिबी अवस्था तथा सपनाको..
नक्कली जग्गा धनि बनी जग्गा ठगी
शुक्रबार, आषाढ २३, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार २३ । नक्कली जग्गाधनी बनी ठगि गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । त्यसमध्ये मालपोत कार्यालय बाँकेमा कार्यरत कर्मचारी समेत रहेका छन् । थप बिवरण जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले संचार माध्यमलाई उपलब्ध गराएको जानकारीबाट । नक्कली जग्गा धनि बनी जग्गा ठगी घटना विवरण :- जिल्ला बाँके साबिक खासकारकाँदो गा.बि.स.वडा नं. २ हाल नेपालगंज उप-महानगरपालिका वडा नं. १८ बस्ने बर्ष..
नगरपालिकामा ट्याक्टरमा अझै हटेन राप्रपाको नाम
नेपालगन्ज, असार २३ । यस अनलाईनमा रकम सरकारको नाम राप्रपाको शिर्षकमा बिहिवारराती समाचार प्रकाशन भएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नयाँ ट्याक्टरमा लेखिएका शब्द मेटिएका छन् । राप्रपाका पर्साका समानुपातिक सांसद राजकुमार अग्रवालको निर्वाचन विकास कोषको खर्चमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २ वटा ट्याक्टर खरिद गरिएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक लगानीमा खरिद गरिएको ट्याक्टरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाम उल्लेख गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा राप्रपाका..
९० बर्षिय काकालाई ठग्न खोज्ने भतिजा पक्राउ
नेपालगन्ज, असार २३ गते । ९० बर्षिय काकालाई ठगि गर्ने बाँकेका जानकी गाउँपालिका ३ करमोहनाका उमर अली बागवानसहित दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काकालाई ठगि गर्नका लागि भतिजाले गाउँकै अर्का एकजनासँग मिलेर गरेको योजना यसप्रकार रहेको छ । घटना विवरण  उमर अली वागवान (भतिजा) र रहिम वक्स वागवान (काका) नाता पर्ने ।  रहिम वक्स वागवानको छोरा नभएको छोरी मात्र रहेको,..
भोजभतेरको रकम सडक मर्मतमा
नेपालगन्ज, असार २३ गते । बाँकेमा स्थानीय तह दोस्रोचरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बिजयी उम्मेदवार मात्रै होइन, समर्थकहरु समेत उत्साहित भएको अवस्था छ । करिब ३ महिनासम्म निर्वाचन अभियानमा सक्रियतापुर्वक लागेका नेता कार्यकर्ताहरु विजयउत्सवमा रमाई रहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु भने पदभारग्रहण गर्दै आप्mनो काममा लागिसकेका छन् । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर २० मनिकापुरका नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विजयउत्सवको नाममा कुनैपनि भोजभतेर नगर्ने सहमती गरेका..
रकम सरकारको नाम राप्रपाको
नेपालगन्ज, असार २२ । राप्रपाका पर्साका सांसद राजकुमार अग्रवालको संसद विकास कोषको खर्चमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २ वटा ट्याक्टर खरिद गरिएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक लगानीमा खरिद गरिएको ट्याक्टरमा राप्रपादवारा प्रदानित उल्लेख गरिएको छ । राप्रपाका तर्फबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शम्शेर राणाले बिहिवार भएको बैठकमा राप्रपाले २ वटा ट्याक्टर खरिद गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । तर सरकारी रकममा ट्याक्टर..
भारतबाट ९ बालकको उद्दार
बाँके, असार २२ गते । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट ९ जना बालकको उद्दार गरिएको छ । नयाँ दिल्लीमा जोखिमपुर्ण अवस्थामा रहेका तथा अलपत्र परेका ९ जना बालकको उद्दार गरिएको हो । भारतीय प्रहरी र सङ्घ संस्थाले उद्दार गरी बालगृहमा राखिएका बालकलाई माईती नेपाल नेपालगन्ज,केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिको सहयोग र पहलमा नेपालगन्ज ल्याइएको छ । माईती नेपाल..
धवल शम्शेरलाई डुबानकै चिन्ता
नेपालगन्ज, असार २० । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएको केही समयपछि डा. धवल शम्शेर राणाले सामाजिक संजालमा मतदातहरुदाई धन्यवाद दिए । उनको फेसुबक स्टाटसमा भनिएको छ ,– नेपालगन्ज नगर बासी आमावुवा, दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुमा धेरै धेरै धन्यवाद । मलाई र मेरो पार्टीलाई जुन बिश्वासले मत दिनुभएको छ त्यो बिश्वास कायम रहने काम गर्ने छु ।नेपालगन्ज नगरलाई देशकै नमुना सहर बनाउन..
ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुनुस
मंगलवार, आषाढ १३, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार १३ गते । बाँकेमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रर्याप्तमात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीलाल पन्थका अनुसार लागि नेपाल प्रहरी , म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी गरी दुई हजार ५०० परिचालन गरिएको छ । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका ४० वटा टिम परिचालन गरिएको..
बाँके मतदाता परिचयपत्र बितरण
नेपालगन्ज, असार ११ गते । असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बाँकेका सबै तहमा मतदाता परिचयपत्र बितरणको कार्य सुरु भएकोछ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजानारायण पौडेलका अनुसार बिहानदेखि नै मतदानस्थलमा परिचयपत्र बितरण कार्य सुरु भएको छ । निर्वाचनका लागि बाँकेमा एकहजार ७०० कर्मचारी परिचालन भएका छन् । बाँकेमा १३६ मतदानस्थलमा २९५ मतदान केन्द्र रहेका छन् । नेपालगन्ज बाहेकका सबै..
सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र बितरण गर्ने खनालको प्राथमिकता
शुक्रबार, आषाढ ९, २०७४ साल
कोहलपुर, असार ९ । गोपी खनाल कोहलपुर क्षेत्रका एमालेका ईमान्दार, त्यागी र सादगी नेताका रुपमा परिचित छन् । उनै खनाललाई असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ बाट वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । कोहलपुरको कौशिलानगर क्षेत्र नेकपा एमालेको गढको रुपमा परिचित छ । यसअघिका दुईवटै स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारहरु विजयी भएका थिए..
खजुराको ईगाउँमा राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने काँग्रेसको प्रतिवद्धता
नेपालगन्ज, असार ९ गते, नेपाली कांग्रेस खजुरा गाँउपालिकाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि स्थानीय प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बागेश्वरीको ईगाउँमा राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने काँग्रेसको प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ । यसैगरी डिगाउँमा फुटबल मैदान बनाइने छ । खजुरालाई नमुना बजार बनाउने योजनासहितको प्रतिबद्धतापत्र शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिबद्धतापत्रमा गिजरामा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई तत्काल लालपूर्जा दिनेदेखि लिएर मुस्लिम छात्राहरुका..
कस्ता छन नेपालगन्जका मेयरका प्रतिवद्धता ?
नेपालगन्ज, असार ९ । असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट मेयरका प्रत्यासीहरुले नेपालगन्जलाई डुबानमुक्त बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपालगन्जमा क्रियटिभ ह्ण्डसको आयोजनामा शुक्रबार भएको मेरो शहर मेरो नेपालगन्ज पाँचबर्ष पाँच प्रतिवद्धता कार्यक्रममा सहभागी अधिकाँश उम्मेदवारहरुले डुबानमुक्त शहरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका हुन् । यसैगरी नेपालगन्जलाई फोहरमुक्त र हरित शहर बनाउने, चक्रपथ निर्माण गर्ने, छात्रा डिग्री कलेज स्थापना गर्ने,..
राजश्व अधिकृत पाँचलाख घुससहित पक्राउ
बाँके, असार ९ गते । राजश्व अनुसन्धानको मध्य तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयमा कोहलपुरमा कार्यरत दुईजना कर्मचारी पाँच्लाख बढि घुससहित पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रंगेहात पक्राउ गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको टोलीले बिहिवार राती ८ बजेतिर अनुसन्धान अधिकृत भिमप्रसाद घिमिरे र कम्प्युटर अधिकृत गोविन्दबहादुर शाहीलाई सेवाग्राहीबाट पाँचलाख ७० हजार रुपिया घुस रकम..
नेपालगन्ज आउँदै गरेको बस दुर्घटनामा
नेपालगन्ज, असार ६ । काठमान्डौबाट नेपालगन्ज आउँदै गरेको बस दुर्घटनामा परि एक जनाको ज्यान गएको छ । भेरी अञ्चल यातायात ब्यवसायी संघद्धारा सन्चालित ना ५ ख ७४९० नम्वरको मानसरोवर मेट्रो डिलक्स बस कपिलवस्तुको वनगाईमा दुर्घटनामा परेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलबस्तुका अनुसार सो बस लु १ ख ७५५९ नम्वरको ट्रकमा ठोकिएको हो । दुर्घटनामा परि बसका चालक बाँके कंचनापुरका २५ बर्षिय..
दुर्घटनामा किदवाइको मृत्यु
नेपालगन्ज,असार ५ । बाँकेको राप्ती सोनारिको गाभरमा सवारी दुर्घटनामा एक जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. एम किदवाईका छोरा डा.अमन किदवाइको ज्यान गएको हो । दुर्घटनामा अमनका भाई डा. असिम किदवाई र मेडिकल कलेजमै कार्यरत डा. बिमर्श अधिकारी घाइते भएका छन् । दाङबाट नेपालगन्ज आउदै गरेको बा ९ च ५९४७ नम्बरको कार सोहि दिसाबाट..
प्रमोद रिजालको अगुवाईमा धम्बोझीमा जेष्ठ नागरिक प्रतिक्षालय
शनिबार, आषाढ ३, २०७४ साल
नेपालगन्ज, असार ३ । प्रमोद रिजाल असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट वडा नम्बर १ धम्बोझीका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । रिजाल धम्बोझी क्लबको संस्थापक अध्यक्ष र हाल सल्लाहकारसँगै वाटरपार्क संरक्षण अभियान अभियानमा पनि सक्रिय छन् । उनै रिजालको पहल र अगुवाईमा पछिल्लो समय धम्बोझीमा जेष्ठ नागरिक प्रतिक्षालय निर्माण भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर..
राजमार्गमा एकाबिहानै बस दुर्घटना
नेपालगन्ज, असार ३ । पुर्ब–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका ९ मा शनिबार बिहान यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा परेको छ । दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने २० जना घाइते भएका छन् । बुटवलबाट सुर्खेतका लागि छुटेको लु १ ख ५९०९ नम्बरको बस बिहान २.२० बजेतिर अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ । दुर्घटनामा भारतीय नागरिक ४५..
कारागारभित्रै गरे कैदीले आत्महत्या
नेपालगन्ज.असार १ । नेपालगन्ज कारागारमा जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा थुनामा रहेका एक ब्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन । २७ बर्सिय अरबिन्द बर्माले बुधबार साझ झुन्डिएर आत्महत्या गरेको कारागार प्रमुख श्याम लामिछानेले जानकारी दि । कारागार भित्र रहेको मन्दिरको हुकमा प्लास्टिकको डोरीले पासो लगाइ आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बर्मा गएको चैत १३ गतेदेखी अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागी थुनामा बसेका हुन । नेपालगन्ज..
छात्राहरु सामुहिक बेहोस
कोहलपुर, जेठ २९ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा रहेको जनज्ञानज्योती मावि कौशलिानगरमा कक्षा १० मा अध्ययनरत चारजना छात्रा एकसाथ बेहोस भएका छन् । कक्षा कोठमा अध्ययन भईरहेको समयमा विद्यार्थीहरु एक्कासी बेहोस भएका हुन् । बेहासपछि उनीहरुलाई अभिभावकहरुले घरमा लिएका छन् । अत्याधिक गर्मीका कारण छात्राहरु बेहोस भएको हुन सक्ने विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । ..
बसपार्क निर्माण कार्यमा चरम लापरवाही
बाँके, जेठ २४ – नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र रहेको बसपार्क पुन निर्माणको कार्यमा लापरवाही देखिएको छ । मध्यपश्चि क्षेत्रकै औद्योगिक नगरि भनेर चिनिने नेपालगन्ज बजारमा अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण कार्यमा चरम लापरवाही देखिएको छ । गत जेठबाट सुरु गरिएको निर्माण कार्य सक्नुपर्ने ३ महिनामात्रा बाकी रहेको छ । ३ महिना मात्रा बाँकी रहदा निर्माणको कार्य गति लिन सकेको छैन । नेपालगन्ज उपमहा–नगरपालिकाले नगर विकास..
एमाले उम्मेद्धारको निधन
बाँके, जेठ २४ गते । यहि असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा सदस्य पदका उम्मेद्धार मुन्ना कवाडियाको मंगलबार निधन भएको छ । ४५ बर्षिय कवाडियाको हृदयाघातका कारण मंगलबारराती घरमै निधन भएको नेकपा एमाले बाँकेले जनाएको छ । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी बाँकेले सर्वसम्मत उम्मेद्धार बनाउने निर्णय गरेपछि कवाडिया वडा अध्यक्षका..
भुमिसुधारका नासु कर्ण २० हजार घुससहित पक्राउ
नेपालगन्ज, जेठ २४ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कोहलपुरले सेवाग्राहीबाट २० हजार रुपिया घुस लिदैं गरेको अवस्थामा भुमि सुधार कार्यालय बाँकेमा कार्यरत नायब सुब्बा शैलेन्द्रकुमार कर्णलाई बुधबार पक्राउ गरेको छ । कर्णले जग्गा बाडफाँड गर्ने प्रयोजनका लागि बिभिन्न बहानामा घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवम उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको टोलीले बुधबार कार्यालय परिसरबाट घुस..
Results 1933: You are at page 63 of 65